मलेशियाबाट नेपाल आउदै गरेको जहाजमा घट्यो यस्तो घ*टना ! एक नेपाली युवकको मृ*त्यु – PathivaraOnline
Home > समाचार > मलेशियाबाट नेपाल आउदै गरेको जहाजमा घट्यो यस्तो घ*टना ! एक नेपाली युवकको मृ*त्यु
काठमाडौं, ८ साउन । बैदेशिक रोजगारीमा गएका दोलखाको जिरी नगरपालिका ८ का एक युवकको घर फर्किने क्रममा जहाज़मै मृ*त्यु भएको छ । जिरी ८ निगालेका ३२ बर्षीय ओंग दोर्जे शेर्पाको मलेशियाबाट नेपाल फर्किने क्रममा आज दिउसो मृ*त्यु भएको हो ।
मलेशियन एयरर्लाइन्समार्फत नेपाल आउदै गरेकाश्रेपाको त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय बिमान स्थलमा जहाज ल्याण्ड हुनु अगाबै मृत्यु भएको बताएको छ । दुई महिना अघि एपेन्डिक्सको समस्या भएर अप्रेसन गरेका शेर्पालाई काम गर्ने कम्पनिले उपचार गराई घर फर्काएको थियो । बिहान ११.३० बजेसम्म बोल्दै गरेको शेर्पाको जहाज़भित्रै एक्कासी मृत्यु भएको हो । श्रेपा डेड वर्ष अघि बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मलेशिया पुगेका थिए ।